नेपाललाई आज इतिहास बनाउने सुनौलो अवसर - Namasteholland, News, Information and Technology
२० माघ २०७५, आईतवार ०९:०९0218
टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र युएई निर्णायक तथा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । खेल आज पौने ३ बजे दुबईको आइसिसी एमेडेमी मैदानमा हुनेछ ।
खेलमा जित हात पार्ने टिमले ३ खेलको सिरिज कब्जा गर्नेछ । आईसीसीबाट ४ वर्षलाई एक दिवसीय मान्यता पाएपछि दोस्रो सिरिज खेलिरहेको नेपाललाई आज इतिहास बनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ ।
पहिलो टी–२० मा २१ रनले पराजित भएको नेपाल दोस्रो टी–२० मा ४ विकेटको जित निकाल्दै सिरिजमा पुनरागमन गरेको हो ।
दुवै टिमले एक/एक खेल जितेकाले आजको अन्तिम खेल निर्णायक हुने छ ।
नेपाल एक दिवसीय जसरीनै सिरिज जित्दै इतिहास बनाउने दाउमा छ । तर यूएईले एक दिवसीय सिरिज गुमाएको पीडा विर्सन पनि टी–२० सिरिज जित्न खोज्ने छ ।
दोस्रो खेलमा नेपालले १०८ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा ३ बल बाँकी छदै ६ विकेट गुमाएर पुरा गरेको थियो ।
नेपालाई जिताउन दीपेन्द्रसिं ऐरी र पवन शर्राफले उत्कृष्ट साझेदारी गरेका थिए ।
पहिलो बलमै कप्तान पारस खड्का आउट भएपछि दबावमा आएको नेपाललाई ऐरी र शर्राफले १९.१ ओभरमा १०१ रनको स्थितिमा पु¥याएका थिए ।
१८ रन बनाएर पवन आउट भएपछि क्रिजमा आएका सोमपाल कामीले एक बल पनि फेस गर्न परेन भने लगातार छक्का र चौका प्रहार गर्दै दीपेन्द्रले खेल जिताए ।
दीपेन्द्र ४७ रनमा नटआउट रहेका थिए । अहिले नेपाली टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ । उनीहरुले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङ सबैमा पोख्त छन् । त्यसैले युवा खेलाडीहरुले टिममा स्थान बनाउँदा अनुभवी र पाका खेलाडीहरु क्रमश बाहिरिने क्रममा रहेका छन् ।
नेपालले युएई विरुद्धको तीन एकदिवसीय सिरिज २–१ ले जित्दा कप्तान पारस खड्काको शतकीय साझेदारी बाहेक अरु कुनै खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए स
रोहितकुमार पौडेल, सन्दीप जोरा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । जसले गर्दा टिममा युवा खेलाडीले अनुभवी खेलाडीमा दबाव दिएका छन् ।
टी २० मा पनि सुरुवाती दुई खेलमा युवा खेलाडीले बलियो प्रदर्शन गरिसकेका छन् । त्यसमा विशेष गरी सन्दीप जोरा, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामीले ब्याटिङ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे भने बलिङमा फेरी पनि सोमपाल कामी, सन्दिप लामिछाने अभिनाश बोहोरा उत्कृष्ट रहे ।
नेपाली टिम– पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल, सन्दीप लामिछाने, बसन्त रेग्मी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, करण केसी, ललितनारायण राजवंशी, आरिफ शेख, रोहितकुमार पौडेल, प्रदीप ऐरी, सोमपाल कामी, विनोद भण्डारी, भीम सार्की, अविनाश बोहरा, पवन सर्राफ र सन्दीप जोरा
युएई टिम– मोहमद नावीद (कप्तान), मोहमद उस्मान, अस्फाक अहमेद, चिराग सुरी, सइमान अनवार, मोहमद बोता, गुलाम साबेर, इमरान हइदर, तहिर मुग्हाल, अमिर हायत, जहूर खान, क्वादीर अहमेद, फावाद नवाज, अब्दुल शाकूर, शुल्तान अहमेद, सिपी रिजवान
५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०७:१७0288
३ असार २०७५, आईतवार १८:०६0229
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०८:२१0234
Hey Buddy!, I found this information for you: "नेपाललाई आज इतिहास बनाउने सुनौलो अवसर". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8/. Thank you.